बालुवाटारबाट सडकको स्विच ! || राजनीति समाचार
बालुवाटारबाट सडकको स्विच !
काठमाडौं/पछिल्लो समय मुलुकमा भौतिक निर्माण, सडक, पुल पुलेसाको उद्घाटन तथा शिलान्यासको लहर चलेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरु र स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई समेत शिलान्यास र उद्घाटनमा भ्याई–नभ्याई छ ।
गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ स्थानीय सडकको एकैपटक शिलान्यास गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६५ वटै पक्की सडकहरू बन्ने जनाइएको छ । जबकि यी सडक योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा कुल ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको थियो । फागुन यता झण्डै २०० सडक सञ्जाल तथा १०० हारहारीमा पक्की पुलको शिलान्यास भएका छन् ।
केही समयअघि मात्र सरकारले ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । गत फागुनमै प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी राजमार्गमा बन्ने धरान–बाहुनडाँगी सडक खण्डका ३१ वटा पुलको एकैपटक शिलान्यास गरेका थिए । यस्तो उद्घाटन र शिलान्यासको कार्य अहिले पनि जारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिनमा दैनिक साढे ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे (पिच) भएको दाबी गर्छन् । यता उनकै मन्त्रिमण्डलका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले भने उक्त तथ्याङ्क पिच नभएर सडक विस्तारको भएको जनाएका छन् । मन्त्री नेम्वाङले शनिबार आयोजित १६५ सडक शिलान्यास कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सडक निर्माण तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे । उनले हाल मुलुकमा दैनिक साढे ६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको दाबी गरे ।
तर, दिनमा साढे ६ किलोमिटर सडक बनिरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रति प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकमाथि प्रश्न गरिनुपर्ने ती पूर्व प्रशासकले जनाए ।
सरकारले गरेको दाबी र वार्षिक बजेटको अनुसूची १६ मा उल्लेख भएको बजेटका वीचमा म्याचिङ भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने सरकारी दाबीको ‘फ्याक्ट चेक’ गर्न सजिलो हुने ती पूर्व सरकारी अधिकारी जनाउँछन् ।
१०० अर्ब डलर १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र पुर्‍याउ...